Fayyaa/Health - Caboowanci.com-Oromia
Namoonii tokko tokko rakkoo bishaan kan ka'ee qulqulinna qaama issan muudachaa jira. Kana qofa mitti yeroo mana keenya baanee bakka namoonii itti dananatan ykn bayyatan itti makaminnu waan tokko balidhinaan itti yaaduu qabinna. Kana jechuun qulqulinii afuura afaan koo keessa bahu, qulqulinii luka kophee kooti fi boobaa kooti... kkf itti yaanne namoota quunaminnuu ykn namoota geejiba keesati quunaminuu ammam isanis anas jeequu danda'uu irrati qophooffinnee manaa bahuu qabinnna.
Kanneef ykn rakkoo kana hirridhisuufi salphisuudhaafi moo dirqama bishaan gahaa ykn bishaa liitira 20 ol qabachuun nu irra hin jiru. Yoo jiraatees gaariidha garuu bishaa litiraa(litter) 1/2 yoo qabaanne rakkolee kana akka salphaatii furmaata itti laanna. Akkamitti yoo jetanii: 1ffaa, bishaan kubbaayyaa tokko kana keessati yoo jiraate Loomii ykn lemon tokko keessati cuunfina. Saamunaa ykn andarqiinis yoo jiratee itti gargaramuu ni danda'amma. sana booda fooxaa ykn waccu xiqaa dhaan keessati jiisinne cuunfinna.
2ffaa, Erga fooxiichii cuunfamee kanaan qaama keenya hundaa issa sukkuminnee xurii nu irra jiru akka salphaati ofi irra baasinna.
3ffaa. Ammas deebbisinne fooxaa kana bishanichaa keesati jiisinee ykn walin makkinne booda ni chuunifinna. Haaluma kanaan amma balidhiinan bishaan gahaa arganne qaama keenya ququulleefannutti mala kanan fayyadaminne qulqulinna qaama keenyaa haa eegannun jedha.
Sababa dhimma 5 irran kan ka'een qaaminni keenya fi sammuun keenya dadhabidii nu irrati uumma. 1ffaa, Hirriba dhabiinis bakka guddaa kan fudhatuu ta'uun issa beekamee jira.
2ffaa, Kan itti aanu moo wal irraa kuttiinissa sochii qaama ykn Activity. Yoo xiqqaatee guyyaa tokko keessati daqiiqaa 20 fi qaama keessa sochii xixiqaadhaan jajabeessun nu irra jira. Kun moo qaaminni keenya akka huminaa horaatuufi oomishiinii Oxygen fi Vitamin (Nutrition) qaama keenyaaf barbachisan akka ol ka'uufi qaaminii keenyaa rakkoo addaadaa ofi irraa dhoowwu danda'uu hoomisha.
3ffaa,Dhabbiinissa bishaan gahaa dhuguu dhiisuun kan ka'ee huminii ykn Oxygen nin dhiiga keenyaa fuudhaa qaama keenyaaf raabisuu waan qaldhatuuf bishaan akka gahaati dhuguutu nu irra jira. Waluumaa galatii 2% xurii qaama keenyaa keessa haala finicaaniitin nu keessa baha. Onneen keenyas akka gaariiti akka qilleenissa argatuufi akkasumas moo mashaalee keenya akka gariitti ulifina qabaatu gargaara.
4ffaa, Hirridhina sibiila (Iron) akka gahaati dhabuu. Kun yoo ta'ee Oxygen qaama keenyaa waan xiiqaatuufi qaaminii keenyaa rakkoo Anemia nu fiduu taasisa.
Rakkoo kana fuuruudhaafi kan akka Bolloqqee, Phuuphaa (Inqaaquu) fi Kuduraa addaadda Nyaachuun barbaachissadhaa.
5ffaa, Ciree nyaachuu dhabuu ykn dhiisuu. Nyaani galgala nyaanee halkan guutuufi kan nuufi ta'uu malee ganamaaf nuuf hin ta'uu. Ganama cireen nutti nyaanuu ibidaa gudaa qaama keenyati qabisiissa. Metabolism qaama keenya dabalaa deema.
You don't necessarily need a doctor's prescription to treat your headaches.You don't necessarily need a doctor's prescription to treat your medications:
Apply gentle, steady rotating pressure to the painful area of your head with your index finger and/or thumb. Maintain pressure for seven to 15 seconds, then release repeat as needed.